Finday sy Internet any Java ~ Journey-Assist - Indonezia
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Java » Finday sy Internet any Java
Finday sy Internet any Java (Indonezia)
Finday sy Internet any Java
Ahoana ny fomba hiantsoana an-trano avy any Java
Ahoana ny fomba hiantsoana an'i Java
Tarifa ho an'ny serasera finday any Java
Isan'ny tolotra vonjy maika any Java (any Indonezia)
Ahoana ny fanamarinana ny fifandanjan'ny kaontinao finday ao Java
Mividiana karatra SIM any Java
Avereno ny kaontinao finday any Java
Internet ao Java
Telefaona mahasoa sy vonjy maika any Java (Indonezia)
Serasera finday any Java (Indonezia): Fampahalalana ankapobeny
Amin'ny ankapobeny, ny serasera finday any Indonezia dia mahafa-po, indrindra amin'ny toerana fizahan-tany malaza sy any amin'ireo tanàn-dehibe.
Ireo mpandraharaha finday Java (Indonezia)
Any Bali sy manerana an'i Indonezia dia mpikirakira finday 3 lehibe: Telkomsel, Axiata ary Indosat
Telkomsel any Java
Telkomsel - sampana finday ao Telkom Indonezia. Izy io no tena manandanja indrindra ho an'ny tena ilain'ny mpizahatany. Telkomsel dia mitaky ny 40 isan-jaton'ny tsenan'ny serivisy finday any Indonezia. Ity no hany lozisialy finday miasa isaky ny faritany amin'ity firenena ity, tsy anisany.
Fonosana Starter. Karazana karatra SIM Telkosel:
Fonosana ho an-toerana. 3000 minitra amin'ny tambajotra ho an'ny rupee 58 ary 400 minitra amin'ny tamba-jotra rehetra mandritra ny 16500 rupee isam-bolana.
Ny fonosana malaza indrindra amin'ny mpizahatany. Mitentina 4 rupes ity fonosana 10G ity, manana karama isan’andro 300 mb, 5000 ny fandanjana kaonty ho an'ny antso finday ary fe-potoana maharitra 30 andro. (Amin'ny antsipiriany)
Ny fonosana dia nitaona voalohany amin'ireo rehetra mivezivezy any amin'ny firenena. Izany hoe misy fotoana fohy fohy ananany. Azonao atao ny misaraka amin'ny alàlan'ny fifampiresahana amin'ny feo mandritra ny 60 minitra 2000 rupe, na 47000 rupia mandritra ny telo andro mandritra ny 15 GB amin'ny Internet. (Amin'ny antsipiriany)
Karatra fifanarahana Kartu Halo.
Mazava ho azy fa eo an-toerana, mazava ho azy.Manana drafitra tari-dra 8 izay mitentina 100. rupees hatramin'ny 550 XNUMX. rupees isam-bolana. Manana Internet be dia be izy ireo, SMS maro be, be minitra maimaim-poana ao amin'ny tambajotran'izy ireo manokana. (Amin'ny antsipiriany)
Tranonkala ofisialy www.telkomsel.com
Jereo ny nomeraonao, kitiho ary apetraho ny fifandanjana Telkomsel
Fantaro ny fandanjalanjana sy ny lany (manamarina): * 888 #
Ny fifandanjan'ny lozam-pifamoivoizana sy bonus: * 889 #
Fantaro ny nomeraonao: * 808 #
Fanitarana ny fahamarinana (vanim-potoana maha-marim-pototra ny karatra):
Azonao atao ny manitatra ny lanjan'ny karatra SIM amin'ny vola toy izao:
Rp 5,000 - 7 andro
Rp 10,000 - 15 andro
Rp 15.000 - 20 andro
Rp 20,000 - 30 andro
Rp 25,000 - 30 andro
Rp 50,000 - 45 andro
Rp 100,000 - 60 andro
Rp 150,000 - 120 andro
Rp 200,000 - 150 andro
Rp 300,000 - 180 andro
Ny fampiharana finday ofisialy Android ary on iOS
Axiata any Java
Axiata - iray amin'ireo mpamatsy serivisy fifandraisan-davitra lehibe indrindra any Azia. Manana fandrakofana 90 isan-jato any Bali. Misy karazana 2 fonosana starter - misy 2 MB 3G sy 4G / LTE fifamoivoizana.
Site ofisialy www.xl.co.id/id
Jereo ny nomeraonao, kitiho ary apetraho ny fifandanjana Axiata
Fanamarinana ny kaonty - * 123 #.
Io isa mitovy io dia hampiseho menio iray izay ahafahanao mahita ny zavatra ilainao.
Axiata 2019 tahan'ny
Indosat any java
Indosat (Java. Indonesia)
Indosat - manana fandrakofana azo itokisana ihany koa any Bali, Java ary ireo nosy lehibe hafa any Indonesia. Ampiasaina ankehitriny ny fonosana malalaka. Ny IM sy Mentari izay nampiasaina taloha dia kely kokoa.
Fantaro ny nomeraonao. Zahao ary zahao ny fifandanjana Indosat
Fandanjana ny fandanjalanjana - * 555 #
Fifandraisana amin'ny fonosan'ny Internet - * 123 # ary * 363 # (tariffs).
Fantaro ny nomeraonao - * 123 * 30 #
Mijanona MB - fampiasana "SMS" amin'ny isa 363
Indosat Mobile App
Fangatahana mety ho an'ny Android ary ho iOS . Ao anatin'izany, azonao atao ny mampifandray ny zava-drehetra sy hanitsy.
Afaka miantso avy any Bali mankany amin'ny Federasiona Rosiana ianao amin'ny laharana findainao Telkomsel amin'ny alàlan'ny fidirana voalohany ny kaody 01017, avy eo ny laharana Rosiana tsy misy 8. Ohatra, raha mila miantso ny laharana Rosiana 8999 ** 1212 ianao dia mila miantso ny 01017 999 ** 1212. Avy eo dia tsy mihoatra ny 0,2 dolara ny vidin'ny resaka iray minitra, ary ny SMS - any ho any, manodidina ny 0,05 dolara.
Fiantsoana laharana Indonezia iray avy amin'ny karatra SIM Indoneziana dia 5 ka hatramin'ny 10 cents. isa-minitra, mandoa isam-bolana. Ny sandan'ny minitra voalohany dia avo kokoa noho ny tsirairay manaraka. Mitovy ny tari-dàlana manerana an'i Indonezia, tsy misy fisolokiana eo amin'ny faritra. Mandritra izany fotoana izany, manomboka amin'ny 23 ka hatramin'ny 6 ora dia mihena ny vidin'ny fiantsoana mandritra ny andro.
Raha miantso nomerika finday Indonezia avy any Rosia na firenen-kafa, dia mila miantso +62 (kaody any Indonezia) hatrany am-boalohany.
Antso avy any Java (Indonezia)
Mba hahatratrarana ny vidiny ambany indrindra any an-trano ao amin'ny Federasiona Rosiana na firenena iray taloha an'ny USSR avy amin'ny laharana Indonezianina dia azonao atao ny mampiasa IP-telephony. Ny mpandraharaha finday tsirairay any Indonezia dia manana ny kaody entiny. Raha vita amin'ny karatra SIM Telkomsel, antso 01017 alohan'ny code iraisam-pirenena amin'ny firenenao.Rehefa miantso avy amin'ny karatra SIM Axiata, mila miantso ny kaody 01000. Ohatra, rehefa miantso ny laharana Rosiana ianao dia mila manana isa manaraka ireto: 01000-7-XXX-XXX -XX-XX. Ny resaka amin'ity raharaha ity dia lafo lafo vidy - rupees indoneziana 2 500 eo ho eo (eo ho eo dia manodidina ny 0,02 dolara) ao anatin'ny 1 minitra. Ny SMS ao amin'ny Federasiona Rosiana dia mitentina 700 rupte ao Indonezia (eo ho eo amin'ny 0,05 dolara).
Raha miantso an-trano avy amin'ny laharan-tanety Java iray dia mila miantso 001 ianao, avy eo miditra ny kaody ao amin'ny firenena, ny kaody sy ny laharan'ny faritra.
Ny vidin'ny antso an-trano mora vidy indrindra amin'ny teboka Wartel Telecom, izay aorian'ny ora 23 dia ahena ny vidin-tariby. Raha te-hiantso amin'ny telefaona karama dia mila mividy karatra finday mety amidy, izay amidy any amin'ny tsenambarotra, paositra any Indonezia ary kianja fanaovana gazety.
Antso any Bali avy any amin'ny firenena hafa
Raha miantso nomerika Bali iray avy amin'ny sisin-tany any an-tany hafa, dia tsy maintsy miantso 8 aloha, 10 avy eo, 62 (code of Indonesia), avy eo ny kaonty faritra, avy eo ny laharana an-tariby.
Kaody ho an'ny tanàn-dehibe ao Indonezia
Jakarta - 21, Surabaya (Java) - 31, Bandung (Java) - 22, Medan (Sumatra) - 61, Palembang (Sumatra) - 711, Pontianak (Kalimantan) - 561, Ujungpandang (Sulawesi) - 411, Kupang (Timor) - 380, Denpasar (Bali) - 361, Mataram (Lombok) - 370, Jayapura (New Guinea) - 967, Ambon (Moluccas) - 911.
Raha miantso avy amin'ny telefaona finday any amin'ny firenena hafa mankany amin'ny laharana finday any Indonezia, mila miantso +62 (kaody any Indonezia ianao), avy eo ny kaody operator sy ny laharan'ny mpamatsy.
Antso ao Indonezia
Rehefa miantso an-telefaona finday iray any Indonezia ho any amin'ny isa hafa eto amin'ity firenena ity, ny minitra anaovana resaka iray dia mitentina 1 rupees Indoneziana. Ny fiantsoana amin'ny alina dia mora vidy kokoa: ny 500 minitra dia efa ho ny antsasaky ny vidiny ary ny vidin'ny SMS kosa dia 1 rupie.
Raha miantso avy amin'ny laharana finday Indonezia mankany amin'ny iray hafa, dia tsy maintsy miantso ny kaody Indonesia +62 aloha ianao, avy eo ny kaody famantarana sy ny laharan'ny mpamatsy. Raha nantsoina ho an'ny laharan'ny finday Indoneziana toa anao ny antso, dia mila miantso zero ianao fa tsy +62.
Indonezia maika (Java, Bali, Sulawesi, sns)
Latina - 108.
Serivisy afo - 113.
Polisy - 110.
Ambulance - 118.
Fanamarinana ny kaonty
Telkomsel - * 888 #
Axiata - * 123 #
Indosat - * 555 #
Jereo bebe kokoa amin'ny isa fohy hafa. eto
Aiza hividianana karatra SIM any Java
Ny karatra SIM any Java dia amidy any amin'ny toerana maro: fivarotana finday, magazay lehibe ary seranam-piaramanidina ireo. Amin'ny toerana fizahan-tany, be dia be ny teboka amidy, dia afaka mahita tsy misy olana ianao. Afa-tsy amin'ny toe-javatra sarotra, aza maika ny mividy karatra SIM efa misy eny amin'ny seranam-piaramanidina, satria io no safidy lafo vidy indrindra. Any amin'ny toeram-pivarotana lehibe dia kely ny vidiny.
Misoratra anarana rehefa mividy karatra SIM any Indonezia
Vao tsy ela akory izay, ny karatra SIM any Indonezia dia iharan'ny fisoratana anarana rehefa mividy. Ny rafitra taloha, izay midika fa mandefa laharana ID amin'ny hafatra SMS dia naverina tamin'ny taona 2015, satria nahatonga izany fitomboana izany tamin'ny isan'ireo ID sandoka. Izao, rehefa mividy karatra SIM, mila manolotra antontan-taratasy izay manaporofo ny maha-ianao anao.
Aiza ary ahoana ny fomba recharge kaonty finday any Java
Saika misy fivarotana rojo vy fotsiny. CircleK, MiniMart, CocoMart, sns. Mifandraisa fotsiny amin'ny operator amin'ny fisavana. Hiresaka amin'ny telefaona ary omeo vola.
Ao amin'ny trano fivarotana amidy, karatra SIM, telefaona sy ny toy izany no amidy. Ny fomba dia mitovy amin'ny mpivarotra. Azonao atao ny mangataka amina vaomiera momba ny famerenana ny mahazatra .. mazàna hatramin'ny 2000 rupees.
Recharge finday any Java na Bali (Indonezia) amin'ny Internet
Toerana famerenana ny fandanjalanjana:
Vebmani. Afaka mameno koa ianao. Fa ny vaomiera dia goavana.
Via interface banky an-tserasera ny ankamaroan'ny banky Indonezianina, ary koa amin'ny alàlan'ny ATM.
Internet any Indonezia (Java, Bali, Sulawesi)
Tsy voalaza ny hampiasana ny karatra SIM-cartonà finday tsy indonezianina ho an'ny Internet finday any Indonezia, satria ho lafo loatra ny Internet toa izany. Ny vidiny dia mety hisy dikany. Azo atao ny mampifandray amin'ny roaming amin'ny operator an-tranonao, mba tsy hisian'izany fahatongavana izany na izany aza, dia hihodina ho lafo lavitra kokoa noho ny fampiasana mpizahatany manokana na karatra SIM Indoneziana.
Na dia any amin'ny ankamaroan'ny firenena any atsimo atsinanana aza ny Internet dia mivoatra saika tsy misy tomika ary misy Wi-Fi ao amin'ny hotely tsirairay, tsy dia miserana ihany ny toe-javatra any Indonezia. Ny Wi-Fi eto amin'ity firenena ity dia tsy misy idiran'ny hotely, na any amin'ny faritra mpizahatany malaza toa an'i Bali na Java aza. Noho izany dia tokony hofidinao tsara ny hotely. Raha toa ka mila Internet finday ihany ianao dia afaka mametra ny tenanao amin'ny fividianana karatra SIM miaraka amin'ny fifamoivoizana finday. Misy Wi-Fi ihany koa azo alaina any amin'ny sasany (fa tsy ny rehetra) trano fisakafoanana, kafe, ary trano fivarotana lehibe. Misy koa trano fisotroana Internet ao Java.
Na izany aza, ambany kokoa noho i Rosia, i Ukraine ary i Belarus ny fampandrosoana ny Internet finday. Ny hafaingam-pandehany eto matetika dia tsy dia avo avo. Rehefa mividy karatra SIM Indoneziana hidirana amin'ny Internet, dia tsy tokony hividy mividy karatra iray izay heverina fa hafainganam-pandeha ambony, satria raha ny tena izy dia hahena.
Mba hifandraisanao amin'ny Internet finday, tokony hividy karatra SIM iray amin'ny iray amin'ireo mpikatroka lehibe any Indonezia ianao - Telkomsel, Axiata na Indosat.
Internet ao Java ho an'ny mpizahatany
Ny safidy ara-toekarena indrindra dia ny fampiasana fonosana finday finday. Ny mpandraharaha eo an-toerana dia manolotra fonosana marobe miaraka amin'ny teny sy volume hafa. Ny iray amin'ireo malaza amin'ireo mpizahatany dia ny fonosana Telkomsel SimPATI. Toy izao manaraka izao ny saram-pivarotana SimPATI:
5 GB mandritra ny 3 andro - rupees Indoneziana 28 000 - IDR;
5 GB mandritra ny 7 andro - 36 IDR
10 GB mandritra ny 7 andro - 45 IDR
6 GB mandritra ny 30 andro - 60 IDR
9 GB mandritra ny 30 andro - 90 IDR
16 GB mandritra ny 30 andro - 140 IDR
Raha resaka tarif, misy fisarahana ny fifamoivoizana amin'ny alina sy ny andro. Ohatra, ny 2 GB dia azo ampiasaina irery mandritra ny andro, ary ny 3 GB - manokana amin'ny alina. Ity fampahalalana ity dia aseho ao amin'ny famaritana ny taroa, amin'ny antsipiriany bebe kokoa dia azonao vakiana ny rohy https://www.telkomsel.com
Mba hisorohana ny fahaverezan'ny fotoana amin'ny fandalinana ny valin'ny fampahalalana momba ny fonosana, azonao atao ny mifantoka amin'ny fonosana SimPATI, na aseho tsotra fotsiny ny fepetrao amin'ny mpivarotra (ny habetsaky ny halavany sy ny faharetanao) amin'ny fotoana fividianana, dia afaka manolotra safidy mety izy.
Java - Faritany Indonesia
Vola any Java - Rupiah indonezianina (IDR)
Ny ora ao Indonesia (GMT + 8)